Metatron soo bandhigtay madal macaamil cryptocurrency
Metatron, horyaal technology khaas u ah in la sii daayo la dedejiyey ka badan 2000 apps ku faraxsan yahay in uu ku dhawaaqo in la sii daayo BitMeet ™, madal macaamil cryptocurrency leh adeegyada qiimaha raadraaca iyo meesha laga heli karo hadda on Google Play.
Tilmaamo Bitmeet ™ 's waxaa ka mid ah chat, meelaha ay dadka isticmaala oo doonaya in la iibsado iyo iibiyaan cryptocurrency, binta, cap suuqa, Wararkii Ugu Danbeeyay iyo wax ka badan. hadda Available on Google Play, waxaannu rajaynaynaa in ay la sii daayay qalabka macruufka mustaqbalka dhow.
"Our madal cryptocurrency Bitmeet ™ caawin doonaa ka Biro Naar ah bangiyada Fiat dhexe samatabbixin walacay, abuuro jiil cusub oo soo dhawaataan macaamiisha iyo bixitaanka suuqyada caasimada run ku salaysan garoonka siman oo lagu ciyaaro,"Ayuu yiri agaasimaha Metatron Joe Riehl.
Direxion, ProShares, VanEck baxaan diiwaan gelintii ETF Seeraar
Direxion, ProShares iyo VanEck ayaa ka mid ahaa haystaa sacab muggiis oo soo saara ETF in ay ka noqday diiwaan gelintii ay u bilowdo Seeraar ETFs codsiga laga xoreeyo. nidaamiyo.
On qoraal la xiriira, SEC waxaa uu raadinayaa talooyin ku saabsan xeerarka la soo jeediyay isbeddelo by Chicago Board Options Exchange ah (CBOE) in ogolaan karin dhaafsiga inay taxaan ilaa afar ETFs Seeraar. Cboe ahaa wadaha ugu horeysay sarrifka in laga xoreeyo dalka ah. inay soo bandhigto mustaqbalkooda ku salaysan lacagta digital, isagoo bishii la soo dhaafay si sameeyey.
Sayidka fog, ma waxyaabaha sarrifka ku baayacmushtaray la xiriira lacagaha digital ay ansixiyeen laga xoreeyo. nidaamiyo.
Goldman Sachs: In aragtida Seeraar wuxuu noqon karaa foom sharci oo lacag
Seeraar wuxuu noqon karaa foom sharci ah oo baahsan oo lacag ah, laakiin inta badan aragtida, hadda, sida ay istiraatijiyadda Goldman Sachs.
“Isticmaalka baahsan ee dollar ka baxsan Mareykanka - iyo dollarization buuxa ee dalalka qaar ka mid ah - in ay jiraan waxa ay mar horeba ku weyddiinayaa for dhexdhexaad ah caalamiga ah ee is-dhaafsiga iyo dukaan oo qiimo leh,” ayaa sheegay in Goldman ee Zach Pandl iyo Charles Himmelberg ee note on Wednesday.
In dalalka iyo geesood kuwa nidaamka dhaqaale halkaas oo adeegyada dhaqanka ee lacagta waxaa loo helin bixisey, Seeraar (iyo cryptocurrencies guud) laga yaabaa inay bixiyaan beddeli macne.
Tusaale ahaan, Muga sarrifka Seeraar hirkii ee Shiinaha ka dib markii ay dalka ka bilaabay tirtirayaan on kenta caasimada ee 2016.
In dareenka in, waxaa jira baahi loo Seeraar sida nooc ka mid ah lacag si ay u sameeyaan xawaalad. Laakiin sida qeyb ka mid ah faylalka tacliimeed lacagta a, cryptocurrencies yihiin “dheeraad ah oo waafaqsan a xumbo kuteen classic,” istiraatijiyadda ayaa sheegay in. Waxay xustay in Korea iyo Japan xukumaan Seeraar Muga sarrifka, laakiin sidoo kale waa dal leh nidaamka lacagta deggan.
xaqiiqadu waxa ay tahay in cryptocurrencies weli bar sare sharciyeed in ay nadiifiso meelaha ugu, istiraatijiyadda ayaa sheegay in. Si aad u billowdo la, Dawladaha aan ula socdaan karaa kaasoo bixinta ama qaata lacagaha digital.
Goldman Sachs ayaa lagu soo waramayaa diyaarinta miiska ganacsiga cryptocurrency a.
saliid taageeray cryptocurrency Maduro ayaa diiday baarlamaanka Venezuela ayaa
Baarlamaanka mucaaradka ay maamulaan-Venezuela ayaa Talaadadii mamnuucay "Petro" cryptocurrency ah u dallacsiiyey by Madaxweynaha hantiwadaagga Nicolas Maduro, yeeray dadaal lagu doonayo in si sharci darro ah dayn shidaal dalka lacag yari ayaa ka.
Maduro ayaa sheegay in dowladda soo saari lahaa ku dhawaad $6 billion of petros si ay u kicin lacag adag oo ay uga dhuuntaan cunaqabateyn dhaqaale ku soo rogeen by Washington.
khubaro Cryptocurrency odhan xumo Venezuela ee ay dhaqaalaha u gaar ah, weheliso la'aanta taariikhi ah ixtiraam xukun Socialist Party ee xuquuqda hantida gaarka loo leeyahay, tahay ka tagi doono maal aan dan ka laheyn in isuna petros.
"Tani ma aha cryptocurrency a, tani waa iib hore oo saliid ah Venezuela,"Ayuu yiri xildhibaan Jorge Millan. "Waa dawaarle-dhigay musuqmaasuq."
Maduro ayaa si joogto ah iska indho-dejinta tan iyo markii uu xisbiga laga qabsaday waxaa ka mid ah in 2016, iyo Maxkamadda dawladda pro-Sare ayaa hoos u toogtay ku dhawaad ​​qiyaas kasta oo tan iyo markaas maray.
Maduro ayaa rajeynaya waxaa u adeegi doonaa sida hab bixinta qeybiyeyaasha shisheeye ah oo ka fogaada dhac lacagta in koray more ba'an tan iyo markii cunaqabateynta la galay meesha.
Fund Trat ee Tom Lee: Seeraar si fudud ay labanlaabmi karto in 2018
Mid ka mid ah dibi Seeraar ugu weyn ee Wall Street ayaa sheegay in cryptocurrency ku waayeen “si fudud double” ama xataa xaafuun in 2018.
“Xitaa ku salaysan halis-beddelo ah, Waxaan qabaa Seeraar waxaa laga sugayaa inay si fudud iskhexgalida S&P,” Lee ayaa sheegay on CNBC ee “Futures Hadda.” “On a salaysan muddada-dheer, habka ugu fudud ee ay eegaan Seeraar waa bedelka ama dukaanka ka mid ah qiimaha,” ayuu yidhi. “Sidaas daraaddeed sida millennials ogaado oo dakhli dhalin ah, ay u socoto si ay u isticmaalaan inuu bedel u yahay dahab.”
“Haddii Seeraar helo 5 boqolkiiba suuqa dahabka, in qiyaas ahaan $ 50,000,” ayuu hadalkiisa ku daray. Taasi oo dheeraad ah ka badan 200 boqolkiiba halka ay Seeraar ayaa haatan ganacsiga ku biiro.
On ku salaysan dhow dheer, Lee filaysaa Seeraar ay dib u hanato ay December sare. “Waxaan u maleynayaa in ay bartamihii 2018-, waxaan u socoto si ay qayb ka mid ah jidka waxaa jiri, waana sababta aan helno [Seeraar in $20,000],” ayuu yidhi. “Haddii Seeraar dhab istaagi karin u dhow in $20,000 heerka qeybtii hore ee sanadkan, Waxaan u maleynayaa in qeybta labaad ee 2018, waan arki doonaa dhaqaaqo ka weyn in,” Lee ayaa sheegay in. “Sidaasi darteed waxaan qabaa Seeraar weli waa wax waa in aad leedahay sannadka oo dhan.”
oo dhan macdan qodayaasha ma noolaan doonaa Seeraar yareynta kharashka
Intee in le'eg oo waa bitc ...
Indian isku dhaceen Police M ...
Post Previous:Yaa kaalin weyn warshadaha ee crypto? top 7
Post Next:Blockchain News 11 January 2018